LG G2: စမတ်ဖုန်းတစ်လုံး Kit ပြန်လည်ရရှိရန် Androidsis
LG G2: Android Lollipop မှ Stock Kit Kat သို့ AOSP Rom သို့မည်သို့ပြန်သွားရမည်နည်း
Francisco Ruiz | | LG, ရွမ်, လဲ tutorial, Android ဗားရှင်း
အတော်လေးမကြာသေးမီကငါ, ငါ့နှိမ့်ချအမြင်အတွက်, သင်ပြ ကျွန်ုပ်တို့၏ LG G2 ကို Android Lollipop Stock သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဖြတ်သန်းကြောင်းတစ်လမ်း LG G2 ကို Android Lollipop သို့အဆင့်မြှင့် အဖွဲ့မှ Android 5.0.2 Lollipop ကိုချက်ပြုတ်ထားသော Rom ကိုအသုံးပြုသည် Evomagix.
ကောင်းပြီ၊ ရှင်းလင်းသောဗီဒီယိုဖြင့်ကူညီသည့်လက်တွေ့ကျသောသင်ခန်းစာအနေဖြင့်နောက်လူမှုရေးကွန်ယက်များမှတောင်းဆိုမှုများနှင့်ဘလော့ဂ်သို့မှတ်ချက်ပေးမှုများ၊ CM12 ကဲ့သို့သော Stock Kit Kat Rom သို့မဟုတ် AOSP Cyanogenmod Rom သို့ပြန်သွားပါ.
ယုတ္တိဗေဒ, ဒီလက်တွေ့ကျသင်ခန်းစာနှင့် ဤနေရာတွင်မျှဝေထားသောဖိုင်များသည် LG G2 ၏နိုင်ငံတကာပုံစံနှင့်သက်ဆိုင်သည်, သာ. ကောင်း၏အဖြစ်လူသိများ D802။ ဒီတော့ အခြား LG G2 မော်ဒယ်များကိုအသုံးပြုသူများသည် terminal ကိုအုတ်ခဲနှင့်ဖုံးထားသည့်အတွက်ဤနေရာတွင်ရှင်းပြထားသည့်အတိုင်းမလုပ်သင့်ပေ.
အဲဒီလိုပြောပြီးနောက်ပြန်လှည့်ဖို့ဒါမှမဟုတ်နောက်ခြေလှမ်းတွေကိုစလိုက်ကြစို့ ကျွန်ုပ်တို့၏ LG G2 ကို Android Lollipop မှ Android Kit Kat သို့ Jelly Beam သို့လျှော့ချပါ LG Stock ပေါ်တွင်အခြေပြုသော Stock Rom၊ မူရင်းသို့မဟုတ်ချက်ထားသော Rom မှတဆင့်၊ AOSP Roms မှတဆင့် Cyanogenmod စတိုင် roms၊ ParanoidAndroid, Pac-Rom စသည်ဖြင့်ဖြစ်သည်။
3 Android Lollipop မှ Stock Kit Kat သို့ AOSP Rom သို့မည်သို့ပြန်သွားရမည်နည်း
တစ်ဦးရှိ LG G2 အမျိုးအစား D802 ဒါဒါ အမြစ်တွယ်နှင့်ပြုပြင်ထားသောပြန်လည်ထူထောင်ရေး၏အပိုင်၌တည်၏.
Recovery ကိုနောက်ဆုံး TWRP သို့ပြောင်းထားပါ။ သင်ဒီမှာက download လုပ်နိုင်ပါတယ်.
အရန်ကူးထားပါ၊ nandroid အရန်သိမ်းခြင်း။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ခုလုံးကို operating system ကို၏။
ရှိ USB debugging လုပ်နိုင်ပါတယ် LG G2 developer setting မှဖြစ်သည်။
ဘက်ထရီအား ၁၀၀ x ၁၀၀ အားသွင်းထားပါကအနည်းဆုံး ၅၀% ကျော်အားသွင်းသင့်သည်။
ဖိုင်တွေတတ်နိုင်ရန်လိုအပ်သည် LG G2 ကို Android Lollipop မှ Stock Rom သို့ AOSP သို့ပြန်ပို့ပါ Cyanogenmod နှင့်အလားတူ AOSP Roms များမှ Kit Kat, Jelly Beam သို့မဟုတ် Android Lollipop ပင်ဖြစ်ပါစေ၊ မူရင်း Jelly Beam Bootloader၊ Baseband Kit Kat အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ LG တွင်တပ်ဆင်လိုသော Rom Stock သို့မဟုတ် AOSP ကိုကူးယူပါ။ G2 ။
အောက်ပါ link ကိုမှ, သင်သည် compressed zip အထုပ်ထဲတွင်တိုက်ရိုက် download လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မည် Jelly Beam bootloader နှင့် LG G2 model D802 အတွက် Kit Kat Modem တို့ပါဝင်သည်.
နောက်ဆုံးတွင်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းသင်အလိုရှိသော Rom လိုအပ်လိမ့်မည် သင်၏ LG G2 ကိုလျှော့ချပါ။ Android Lollipop ကိုသုံးလိုသူများ Cyanogenmod 12 နောက်ဆုံးညဥ့်အခါLG G2 မော်ဒယ်လ် D802 အသုံးပြုသူများကိုအကောင်းဆုံးအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံနှင့်လွယ်ကူချောမွေ့စေသည့်အချက်ကကျွန်ုပ်အတွက်သံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။ ဒီ link ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် Cyanogenmod ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတိုက်ရိုက်။ စာရင်း၏ထိပ်ဆုံးတွင်တစ်ခုသည်နောက်ဆုံးပေါ်ညစဉ်ညတိုင်းဖြစ်သည်။
သင်တစ် ဦး ရွေးချယ်လျှင် Cyanogenmo အဖြစ် Rom AOSPအလားတူပြုပါ၊ သင်သည်ဂူဂယ်လ်အပလီကေးရှင်းများ၏ zip ကိုလည်းဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်လိုအပ်လိမ့်မည်၊ Gapps Android Lollipop ဒီ link ကနေ.
Android Lollipop မှ Stock Kit Kat သို့ AOSP Rom သို့မည်သို့ပြန်သွားရမည်နည်း
ဤလိုင်းများအထက်ရှိပူးတွဲပါဗွီဒီယိုတွင်သင့်အားအဆင့်ဆင့်တင်ပြသည် LG G2 Lollipop မှ Android Kit Kat, Jelly Beam သို့ Android Lollipop သို့ AOSP မှတဆင့်အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း။ Recovery TWRP မှနောက်ဆုံးရရှိနိုင်သည့်နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းတွင်ကန့်သတ်ထားသည့်ရိုးရှင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်သည်ပထမ ဦး ဆုံး Jelly Beam Bootloader ကို flash လုပ်ပြီးနောက် LG G2 တွင်တပ်ဆင်ရန် Rom ၏ zip ကိုနောက်ဆုံးတွင် Kit Kat Modem ကို flash လုပ်သည်။ ငါကိုယ်တိုင်အကြံပြုတဲ့ Cyanogenmod 12 လို AOSP Rom ဖြစ်တယ်ဆိုရင်၊ သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ Google GAPPS ကိုလည်း flash လုပ်ဖို့လိုတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » LG G2: Android Lollipop မှ Stock Kit Kat သို့ AOSP Rom သို့မည်သို့ပြန်သွားရမည်နည်း
မင်္ဂလာပါ။ Flash tool နှင့် lg g2 ၏ကိုယ်ပိုင် kdz ကို အသုံးပြု၍ bootloader jb နှင့် modem ကို install စရာမလိုဘဲတိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်မည်လား။
မင်္ဂလာပါသူငယ်ချင်း၊ ကျွန်ုပ်၌ rom lollipop ပါသည့် lg g2 d805 ရှိသော်လည်း kit kat သို့ပြန်သွားရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ သင် d802 မော်ဒယ်ကိုသာဖော်ပြပြီးကတည်းကဒီဖြစ်စဉ်ကဒီ model အတွက်အလုပ်လုပ်တယ်
bootloader ရဲ့ link တွေကမမှန်ကန်တော့ဘူး၊ အနည်းဆုံးတော့ငါနှုတ်ခွန်းဆက်စကားမရတော့ဘူး၊ မင်းရဲ့အလုပ်ကိုဆက်လုပ်ပါ
Jorge gallardo ဟုသူကပြောသည်
Jorge Gallardo ကိုပြန်ပြောပါ
Android ကိုအလွယ်တကူ Unroot လုပ်နည်း
၂၀၁၅ ခုနှစ် Nexus သည်အရင်ကဲ့သို့ဖြစ်ရန်လိုအပ်သနည်း။